बनिसक्दै कलंकी-कोटेश्वर ८ लेन सडक, कुन लेनमा कति गतिमा सवारी चलाउने ? [फोटो/भिडियो]
काठमाडौं – कलंकी–कोटेश्वर आठ लेन सडकको निर्माण कार्य करीब अन्तिम चरणमा पुगेको काठमाडौं चक्रपथ सडक आयोजनाले जनाएको छ ।
कलंकीबाट बल्खु, सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वरसम्मको १० दशमलव ३७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
सडकको फिनिसिङ मात्र बाँकी रहेको र यसलाई छिट्टै पूर्णता दिने आयोजनाका प्रवक्ता इञ्जिनियर निरञ्जन अर्यालले बताए ।
सडकको स्तरोन्नति चीन सरकारको सहयोगमा साङ्घाइ कन्स्ट्रक्सनले सन् २०१२ डिसेम्बरमा शुरु गरेको थियो ।
बीचमा भूकम्प, नाकावन्दीजस्ता कारण देखाउँदै आयोजनाले काम सक्न ढिलाइ गरेको हो ।
कसरी चलाउने सवारी ?
मुख्य सडक (बीचको सडक)मा प्रतिघण्टा ५० किलोमिटरको गतिमा सवारी चलाउनुपर्नेछ । यस्तै रिलिफ रोड (साहयक सडक)मा प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गतिमा सवारी चलाउन सकिने बताइएको छ ।
मुख्य चोकहरूमा भने ट्राफिक सिग्नलहरू राखिनेछन् ।
सडकको बीचबाट २५/२५ मिटर चौडाइ दायाँ र बायाँ मेन रोडलाई लिइएको छ । क्यारिज रोड १५ दशमलव ५ मिटर चौडाइ रहेको र पैदलयात्रीका लागि २ दशमलव ५ मिटरको फूटपाथ बनाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सडक पिचको मोटाइ सब बेस १८० एमएम, बेस ३२० एमएम, सर्फेस् ६० एमएम र अर्को सर्फेस ४० एमएमको गरी कुल ६०० एमएम रहेको छ ।
माथिल्लो भाग अर्थात् कालोपत्रेको आयु ५ वर्ष रहेको इञ्जिनियर अर्याले बताए ।
यसक्षेत्रमा ४ ठाउँमा दायाँ/बायाँ गरी जम्मा आठवटा मोटरेबल पुल बनिसेका छन् । ३ ठाउँमा आकाशे पुल पनि बनाइएको छ ।
अन्डरपास पनि अन्तिम चरणमा
यस सडकखण्ड अन्तर्गत ८ सय मिटरको कलंकीमा अन्डरपास पनि छ । यो अन्डरपासको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । थारै ठाउँमा कालोपत्रे गर्न र लेन अनुसारको चिह्न राख्न बाँकी रहेकाले केही दिन पछि मात्र यो सञ्चालनमा आउने बताइएको छ ।
उनले भने – ‘बर्सात्का कारण काममा केही ढिलाइ भएको हो, छिट्टै काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ आयोजनाका महानिर्देशक प्रकाशचन्द्र भण्डारीले बताए ।
काम नसकिँदा बल्खु–कलंकीमा सास्ती
बल्खु–कलंकी सडकखण्डमा अहिले धूलो र हिलोले हिँडिसाध्ये छैन । पानी पर्दा हिलो र नपर्दा धुलोले यात्रुहरूलाई सास्ती भइरहेको छ ।
हिलोमा सवारी साधनहरू फसिराखेका देखिन्छन् ।
बल्खुबाट कलंकीतर्फ ४ सय मिटर पर महानगर यातायातको गाडी फस्दा झण्डै डेढघण्टा सवारी जाम भयो ।
ट्राफिक संकेत नहुँदा दुर्घटना
पिच भइसकेको सडकमा पनि ट्राफिक संकेतहरू नहुँदा दुर्घटना निम्तिन थालेको छ । एकान्तकुना चोकमा दैनिकजसो चार/पाँचवटा दुर्घटना भइराख्ने सोमवार ड्युटीमा भेटिएका ट्राफिक प्रहरी विकासबहादुर चन्दले बताए ।
‘एकान्तकुनामा दैनिकजसो दुर्घटना हुने गर्दछ । ट्राफिक संकेत र लेन नहुँदा दुर्घटना भएको हो ।’
प्रदेश सभाको ‘कछुवा’ गतिप्रति सांसदको आपत्ति, हिउँदे अधिवेशन शुरू बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको छ । बजेट अधिवेशन सकिएको ४ महिनापछि प्रदेश सभाको हिउँदो अधिवेशन बुधबारदेखि शुरू भएको हो । अधिवेशनमा बोल्दै प्रदेशसभा सांस...
प्रदेश सरकारले हवाई टिकटमा अनुदान दिने, प्रतिटिकट १ हजार रुपैयाँ
कांग्रेस महासमिति बैठक– पेचिलो बन्दै हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा
ब्राजिलको एक चर्चमा गोलीकाण्ड हुँदा चारजनाको मृत्यु
आज स्व. निर्मला पन्तको जन्मदिन : धर्नास्थलमै हवन गरेर आत्मशान्तिको कामना